विदेशबाट फर्किएर तरकारी खेतीमा व्यस्त ‘शेरबहादुर’ | Mechikali Daily
विदेशबाट फर्किएर तरकारी खेतीमा व्यस्त ‘शेरबहादुर’
Posted By: रमेश पराजुलीon: ३० श्रावण २०७७, शुक्रबार १८:२९
रामपुर, साउन ३० । एक समय शेरबहादुर सोती पनि रोजगारीका लागि विदेशीने युवाहरूको लाइनमा थिए । तर, अहिले गाउँलाई नै उद्यमशील बनाएका छन् । पाल्पाको निस्दी गाउँपालिका वडा नं ५ गल्धा गेझाका सोती निम्न आर्थिक अवस्थाका कारण विदेशिएका शेरबहादुरलाई विदेशमा सजिलो भएन ।
विदेशमा पनि कहाँ सजिलो छ र ? अनेक कष्ट भोग्नु परेको बताउँछन् । बहराइनमा साढे दुई वर्ष बसेर उनले त्यहाँका दिन सुनाउँदै अहिले आफ्नो गाउँमा मेहनेत गर्न थालेसँगै खुसी महसुस भएको बताए । विदेशमा रहँदा फर्निचर उद्योगमा काम गरेका उनी न सुत्नको समय न खानको समय सारै गाह्रो भएको बताए ।
विदेशमा पाएको दुख र त्यहाँबाट सिकेको सिपलाई सदुपयोग गरी हाल आफ्नै बारीमा तरकारी खेती गरेका उनी र उनको सफलता देखेर अन्य युवाहरुले पनि आफ्नै क्षेत्रमा स्थानीय स्रोत र साधनको सदुपयोग गरेर राम्रो प्रगति गर्न सकिन्छ भन्ने प्रेरणा मिलेको बताए । अहिले आफ्नो ५ रोपनी जग्गामा तरकारी लगाएका शेरबहादुरको बारीमा काँक्रा, टमाटर रहेका छन् । वार्षिक १० लाखको कारोबार गर्ने उनी समयअनुसार गन्य र सिताक्से च्याउ लगाउँछन् ।
आफ्नो गाउँमा केही उत्पादन नहुने भएकाले खाने चामलदेखि सबै सामग्री ढुवानी गरिन्छ । अहिले केही तरकारी विक्री गर्न पाउँदा खुसी लागेको उनले बताए । पोहोरको तुलनामा यस वर्ष राम्रो हुन सकेन विक्री स्थानीय बजारभन्दा बाहिर पठाउन नसकेको बताउँदै कोरोनाका कारण मर्का परेको उनले बताए । १२ वर्षदेखि निरन्तर तरकारी खेती गरेकमा उनले आफ्नो परिवारको आवश्यकता पूरा भएकोमा गर्व गर्छन् । सात जनाको परिवार सबैले उनलाई तरकारी खेतीमा सघाउँछन् । तरकारी खेती मात्र नभई उनी गोवर ग्यासको काम र घर बनाउने मित्रीको काम पनि गर्छन् ।
अहिले स्थानीय तथा आसपासका समुदायका लागि नमुना तथा प्ररणाको स्रोत बनेका उनी आफ्नो काम र पेसासँग सन्तुष्ट भएको बताउँछन् । ‘मलाई सानैदेखि आफ्नो गाउँमा केही गर्ने सपना थियो, जिल्लाकै विकट गाउँपालिका निस्दी हो । मेरो गाउँलाई नमुना गाउँ बनाउने चाहना अहिले सकारात्मक परिवर्तन देखिएको छ ।
हिजो यो केटाले के गर्छ र भन्नेहरु नै आज कृषिसम्बन्धी सल्लाह माग्न आउँदा खुसी लाग्छ ।’ उनले भने । उनले धर्तीमाता कृषी फर्म तथा टनेल निर्माण नाम दिएर व्यावसाय गरेका छन् । उनले निस्दी गाउँपलिका कृषि शाखाबाट ५० प्रतिशत अनुदानमा टनेल निर्माणका लागि १ लाख ५७ हजार ५ सय प्राप्त गरेका छन् । समाजमा उद्यमशीलताको क्षेत्रमा स्थानीय समुदायका लागि प्रेरणाको स्रोत बनेका शेरबहादुर सोतीको संघर्षबाट हामीले पनि केही सिक्ने पो हो कि ? आखिरमा गरे के नहुने रहेछ र ?